by UJen Rosenberg, uMbhali oXhasayo
Esinye seziMangaliso ezisixhenxe zeMandulo zehlabathi
Kukho kwisiqithi saseRhodes (ecaleni kolunxwemeni lweTurkey yanamhlanje), iColossus eRhodes yayingumfanekiso omkhulu, malunga neekhilomitha ezili-110 ubude be-Greek god-sun Helios. Nangona kugqityiwe ngo-282 BCE, le Mangaliso yehlabathi laMandulo limi iminyaka engama-56, xa yahluthwa yindyikima . Iimpawu ezininzi zeso siqithi sasihlala eselunxwemeni zaseRhodes iminyaka engama-900, ukudweba abantu emhlabeni jikelele ukuba bamangalise indlela umntu angadala ngayo into ebaluleke gqitha.
Kutheni Kwakhiwa iColossus yaseRhodes?
Isixeko saseRhodes, esasesiqhingini saseRhodes, sasingqingiwe unyaka. Kuthathwe kwixhoba elivuthayo kunye negazi eliphakathi kwabadlali abathathu baka-Aleksander Omkhulu (uPtolemy, Seleucus, noAntigonus), uRhodes wahlaselwa ngumntana kaAntigonus, uDemetrius, ukuxhasa uPtolemy.
UDemetrius wazama yonke into ukuba angene ngaphakathi kwidolophu ephezulu yaseRhodes. Waletha ama-40,000 amabutho (ngaphezu kobonke abantu baseRhodes), ama-catapults, kunye namaqhinga. Kwakhona waletha iinqununu ezikhethekileyo zeenjiniya ezenza izixhobo zokukhawulela ngokukhethekileyo ukulungelelanisa esi sixeko esithile.
Into ebalaseleyo yile njineli eyakhiwe yayiyi-150-foot tower, ekhutshwe ngeesondo zensimbi, ezithatha i-catapult enamandla. Ukukhusela abahlaseli bayo, iifake zesikhumba zafakwa. Ukuyikhusela kwimibhobho yomlilo ephonswa kweso sixeko, ngasinye samabali asithoba asinayo itanki yamanzi.
Kwathatha ama-3 400 amajoni kaDemetriyo ukuba axhobe esi sixhobo esinamandla.
Noko ke, abemi baseRhodes, bafukula ummandla wabo malunga nomzi wabo, bangela ukuba inqaba enkulu ibe yindaka. Abantu baseRhodes babelwele ngokukhawuleza. Xa ukuqinisekiswa kwavela ePtolemy eYiputa, uDemetrius washiya kuloo ndawo ngokukhawuleza.
Ngokukhawuleza, ukuba uDemetrius washiya zonke ezi zixhobo emva kwayo.
Ukubhiyozela ukunqoba kwabo, abantu baseRhodes banquma ukwakha umfanekiso onqabileyo ngozuko loothixo wabo, uHelios .
Baye Bakha Njani Isitampu Esiqingqiweyo?
Ukuxhaswa ngemali kudla ingxaki kwiprojekthi enkulu njengoko abantu baseRhodes babenengqondo; Noko ke, oko kwakusombulula ngokulula ngokusebenzisa izixhobo uDemetrius abashiye ngasemva. Abantu baseRhodes banyibilikisa ezininzi izixhobo ezihlaselayo zokufumana ubhedu, bathengisa ezinye izixhobo zokukhawulela imali, basebenzisa i-arsenal ekhuselekileyo njenge-scaffolding for project.
URodian umdwebi weeCons of Lindos, umfundi waseLispire Omkhulu u-Lysippus, wakhethwa ukuba enze lo mfanekiso omkhulu. Ngelishwa, iiCrares zeLindos zafa ngaphambi kokuba kuqulunqwe isakhiwo. Abanye bathi uyazibulala, kodwa oko mhlawumbi kuyinyani.
Ngokuchanekileyo indlela iiCrares zeLindos ezakhiwa ngayo umfanekiso omkhulu kangaka kusasazo. Abanye bathi uthe wakha i-ramp rampen, eyayikhudlwana njengokuba isithomo siphelile. Noko ke, abakhi bezakhiwo zanamhlanje baye bayichitha le ngcamango njengengenakwenzeka.
Siyazi ukuba kuthatha iminyaka eyi-12 ukwakha iColossus yaseRhodes, mhlawumbi ukususela ngo-294 ukuya ku-282 BCE, kwaye ixabise iitalente ezingama-300 (okungenani i-$ 5 yezigidi ngemali yanamhlanje).
Siyazi kwakhona ukuba lo mfanekiso unesimo sangaphandle esakhiwa ngesiseko sensimbi esasihlanganiswe ngamacwecwe ebhedu. Ngaphakathi kwakukho iikholeji ezimbini okanye ezintathu zamatye ezazisisiseko esona sakhiwo. Izindonga zensimbi zidibanisa iikholomu zamatye kunye nesiseko sesebe esingaphandle.
Yayibukeka Njani IColossus yaseRhodes?
Umfanekiso wawuza kumela malunga neekhilomitha ezili-110 phezulu, ngaphezulu kwe-footestal yamatye angama-50 (iSitampu seNkululeko yokuPhupha isigidi ezili-111 ukusuka phezulu kwisithende ukuya entloko). Ngokuqinisekileyo apho iColossus yaseRhodes yakhiwe ayifani ncamnye, nangona abaninzi bakholelwa ukuba kwakukufuphi kwinqanawa laseMandraki.
Akukho mntu uyazi kakuhle ukuba imifanekiso ibonakala ngathi. Siyazi ukuba kwakuyindoda kwaye enye yeengalo zakhe yayibambelele. Kwakunokwenzeka ukuba wayehamba, mhlawumbi ebambe okanye egqoke iingubo, kwaye egqoke isithsaba semisebe (njengokuba u-Helios udlalwa).
Abanye baye bacinga ukuba ingalo ye-Helios ibambe itotshi.
Kwiminyaka emine, abantu bakholelwa ukuba iColossus yaseRhodes yafunyanwa imilenze isasazeka, enye kwicala ngalinye. Lo mfanekiso uvela kwi-engraving yekhulu le-16 nguMaerten van Heemskerck, obonisa iColossus kule ndawo, kunye neenqanawa zidlula phantsi kwakhe. Ngezizathu ezininzi, oku kunokwenzeka ukuba akuyiyo indlela uColossus efunyenwe ngayo. Ngenye, imilenze evulekile ngokubanzi akusiyo isimo esihloniphekileyo kunkulunkulu. Yaye enye yileyo yokwenza loo nto, i-harbor ebaluleke kakhulu kwakufuneka ivalwe iminyaka. Ngaloo ndlela, kunokwenzeka ukuba iColossus yayimilenze kunye.
Kwiminyaka engama-56, iColossus yaseRhodes yayimangalisa ukubona. Kodwa ke, ngowama-226 BCE, inyikima yahlasela uRhodes waza yatshisa umfanekiso. Kuthiwa ukuba uKumkani waseGibhithe uPtolemy III wanikela ukuhlawula iColossus ukuba ivuselelwe kwakhona. Nangona kunjalo, abantu baseRhodes, emva kokubonisana ne-oracle, banquma ukungakha kabusha. Bekholelwa ukuba ngandlela-thile le mifanekiso yayikhuphe iHelios yangempela.
Kwiminyaka engama-900, iinqununu ezinkulu zomfanekiso oqhekekileyo walala kwiindawo zase-Rhodes. Okuthakazelisayo, nokuba ezi ziqhekeza zikhulu kwaye zifanele zibone. Abantu bahamba kude nakubanzi ukuze babone amatshaba aseColossus. Njengombhali omnye wasendulo, uPliny, uchazwe emva kokukubona kwikhulu le-1 CE,
Nangona ilala, iyakushukumisa ukumangalisa nokumangaliswa kwethu. Bambalwa abantu abanokubetha isithupha kwizandla zabo, kwaye iminwe yabo inkulu kunezifanekiso ezininzi. Apho izitho ziqhekekileyo ziqhekeka, iindawo zokuvumba ezininzi zibonakala zikhutshwa ngaphakathi. Kulo, kwakhona, kufuneka kubonwe imibala emikhulu yerwala, ngokulingana kwaloo mculi oye wawubeka xa ewulungiselela. *
Ngo-654 CE, iRhodes yahlulwa, ngeli xesha ngamaArabhu. Njengobuphangi bemfazwe, ama-Arabhu awanqumla iinqaba zeColossus kwaye athumela ibhedu eSiriya ukuba ayithengise. Kuthiwa kuthiwa kuthatha amakamela angama-900 ukuba athathe yonke loo bhusi.
* URobert Silverberg, Iimpawu eziMxhenxe zeLizwe laMandulo (eNew York: Macmillan Inkampani, 1970) 99.
Ukuxhatshazwa koBakhoboka bebambe iZizwe ndawonye
Iinqununu zaseItali ezingenanto - iArticoli i-Indeterminativi
I-Litany yoMoya oyiNgcwele
UkuNgcwa kweMithi yasebusika
Iingcebiso ezilishumi eziphezulu zokusungula ukucamngca kwasekuseni ekuseni
Iingoma zeBeatles: "Nanku Kuza Ilanga"
Ukuqonda ukujika kweVolleyball